၈၈- မတ်လ ရာဇ၀င်နဲ့ အင်းလျား
၈၈ ရဲ့ မတ်လမှာ တံဖြူကနေ တံနီလို့ ခေါ်တွင်စေရလောက်အောင် သွေးစွန်းခဲ့ပြီး အင်းလျားရေ.....
၈၇ စက်တင်ဘာမှာ မဆလအစိုးရက ၂၅၊ ၃၅၊ ၇၅ ကျပ်တန်တွေ တရားမ၀င်တော့ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ....
ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး
ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်များနှင့် ၄၇ ခု ဖွဲပစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လမ်းညွန်ချက် (၇) ချက်ဟာ ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သမီးမိန်းကလေး လိုချင်ရင်
ကျွန်မဆီကို ရောက်လာတဲ့ Forward e-mail တခုထဲက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အသီးအရွက် များများစားက သမီးမိန်းကလေးမွေးဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်တွေက.....
ရေးထားတာ တော့ကြာပါပြီ။ အတိအကျ ပြောရရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က မလေးမြေ ဘလောက် မှာ....
နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့မြန်မာကလေး အများစုက ဘာကြောင့် မြန်မာလိုမပြော မြန်မာလို မပြုမူကြလဲ
"သားသား အိမ်စာမလုပ်ရသေးဘူး မဟုတ်လား" "No I'havent" "ဒါဆို သားလေးကစားတာ တော်တော့ အိမ်စာလုပ်လို့ရပြီ ကွန်ပြူတာပေါ်က.....
ရေလွှမ်းမိုးခံနေရသော ဘရင့်စ်ဘိန်း မြို့တော်
Australia နိုင်ငံ Queensland ပြည်နယ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးနေတာ ပြည်နယ်ရဲ့ ဧရိယာ ၇၅% ကျော်အထိ ရေတွေ လွှမ်းမိုးနေပါပြီ။ ဒီနေ့မှာ...
၆၃ နှစ်ကြာမြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး အနှစ်သာရ
ဒီနေ့ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ လွှင့်ထူလာခဲ့တဲ့ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ အလံကို ဖြုတ်ချပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အလံကို စိုက်ထူခဲ့တဲ့ ၆၃ နှစ်မြောက်...
ဒီနှစ် သြစကြေးလျားနေ့မှာ Darling Harbour မှာ ရှိတဲ့ National Maritime Museum ကို ကလေးတွေနဲ့အတူ ရောက်ဖြစ်တော့ သြစကြေးလျားသမိုင်းမှာ ကျွန်မ မသိထားတဲ့ အချက်တခုကို....
သို့ မငယ်ရေ နင့်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ကြားရတော့ ငါသိပ်ပြီးဝမ်းသာပါတယ်။ နင်ဗဟိုမှာ တခြားတပ်ရင်းက ရဲဘော်တယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ဆိုတာ ကြားရလို့ ငါလက်ဖွဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ နင့်အမျိုးသားကိုလည်း ငါမမြင်ဖူးပေမယ့်....
Thursday, July 21, 2016 Nge Naing 1 comment
ဆစ်ဒနီက အထက်တန်းကျောင်း အားကစားသမားလေးနှစ်ဦး
Thursday, June 09, 2016 Nge Naing No comments
ဆစ်ဒနီက Homebush Boys High School မှာ ဗမာကလေးဆိုလို့ သူတို့နှစ်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီကလေးနှစ်ယောယက်စလုံးက အားကစားသမားတွေ ဖြစ်ပြီး ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းကတော့ တယောက်က ကျောင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုနဲ့ တယောက်ကအကောင်းဆုံး ဘောလီဘောသမားဆုကို အသီးသီး ရရှိထားသူနှစ်ဦးပါ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ၁၂ တန်း HSC လုပ်နေရလို့ စာဘက်ကို အဓိကထားနေရတော့ အားကစားကိုသိပ် ဦးစားပေးမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ School Sport Representative တွေအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူနေရဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဝေလျှံနဲ့ သားက ၁၂ တန်းမှာ ယူထားတဲ့ ဘာသာတ၀က်ကျော်တူတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် သင်္ချာသာသာ ပြောင်းတာလည်း တူကြတယ်။ သားက သူယူထားတဲ့ Subject တွေကို မကြိုက်လို့ဆိုပြီး ဥပဒေနဲ့ စီးပွားရေးကို ကျောင်းဖွင့်ပြီး ငါးပတ်မြှောက်မှာမှ ဝေလျှံဆီက မှတ်စုတွေကူးပြီး ပြောင်းခဲ့တယ်။
၇ တန်းကစပြီး သားအထက်တန်းကျောင်း ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ကို မကြာခဏ သားသူငယ်ချင်းတွေခေါ်တတ်ပေမဲ့ အဲဒီကလေးက အိမ်ကို အခုမှတခါပဲ ရောက်ဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွခေါ်ရင် ဘာကြောင့်မပါလဲ မခေါ်ဘူးလား ဆိုတာမေးရင် "သားက ခေါ်တယ် သူကမလာချင်ဘူး၊ သားနဲ့သူနဲ့က အုပ်စုတခုစီ ဆိုတော့ သားအုပ်စုက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝေလျှံနဲ့ မရင်းနှီးတော့ သူမလိုက်ချင်ဘူး" ဆိုတာမျိုး အမြဲပြောတတ်တယ်။ နောက်တခါ အိမ်ကို ဧည့်သည်ခေါ်လို့ အဲဒီကလေးမပါရင် ဘယ်ဧည့်သည်မှ မခေါ်နဲ့လို့ သားကို ကျွန်မပြောထားလို့ ထင်တယ် ပြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တုန်းကတော့ ဥပဒေ Assignment အတူတူလုပ်ရင်း စာကြည့်တိုက်ကနေ အိမ်ကိုခေါ်လာလို့ ရောက်လာတုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် " ပြေးကြည့်မှ ဗမာကလေးနှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ နင်က ဗမာကလေးနဲ့ကျတော့ မခင်ပဲ တခြားကလေးတွေနဲ့ပဲ ခင်တာက ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ" မေးတော့ "ခင်တယ် သားက ပျော်ပော်ျပါးပါး နေတဲ့အခါမှာပဲ သားအုပ်စုက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးတာ အလေးအနက်ထားပြီး ရင်ဖွင့်ရမည့်ကိစ္စတွေကျတော့ ဗမာသူငယ်ချင်းနဲ့ပဲ ရင်ဖွင့်တတ်တယ်" တဲ့။
အဲဒါကြောင့် "ဟယ်..မောင်တိုးရေ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုးပါလား HSC ၁၂ တန်းမှာ အရေးကြီးလို့ အားကစားတောင်မှ မလုပ်နိုင်တာ ကျန်တာဘာမှ စိတ်ဝင်စားလို့ မအားဘူးဆိုပြီး ရင်ဖွင့်စရာတွေ ရှိနေပြီလား အမေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါလို့ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့် အမေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောတာလဲ" ဆိုပြီး မေးတော့ " မေမေက ဘာထင်နေလို့လဲ၊ တခြားဟာ မဟုတ်ဘူး မေမေတို့ ဗမာမိဘတွေက သားသမီးတွေကို Stress ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲ ပြောဖြစ်တာပါ" တဲ့။ "ဘုရားရေ ဒုက္ခပါပဲ ၊ နင့်ကိုမိဘက ဘာစိတ်ဖိစီးအောင် လုပ်နေလို့လဲ" ဆိုတော့ " ဝေလျှံအဖေနဲ့ မေမေတို့နဲ့က အတူတူပဲ အဲဒါကြောင့် ဗမာသားသမီးတွေ အာရှကလာတဲ့သားသမီးတွေဆို ကျောင်းတက်ရတာ Pressure သိပ်များတယ် အဖြူသားသမီးတွေလို မဟုတ်ဘူး" တဲ့။ " မြတ်စွာဘုရား၊ ဒီလောက် အေးအေးဆေးဆေး ဘာမှမပူရဘဲ ပညာသင်နေရတာနင်ပဲ ရှိတယ်၊ ဒါတောင်မှ မိဘကြောင့် စိတ်ဖိစီးလို့ ရင်ဖွင့်ရလောက်အောင် မိဘတွေက နင်တို့ကို ဘာများစိတ်ဒုက္ခပေးနေလို့လဲ" ဆိုပြီးကျွန်မ မေးရတယ်။ ဒီတော့ နှစ်စက Subject တွေ သွားပြောင်းလို့ ကျွန်မဆူခဲ့တာကို ဥပမာပေးပြီးပြောတယ်။ အဲလိုမျိုး အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလားတူ စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရင် သူတို့ဟာ အချင်းချင်း ရင်ဖွင့်ကြတယ် တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ခင်ခင် ဘယ်တော့မှ မပြောဘူးတဲ့။ ဝေလျှံလည်း သူ့လိုပဲ သူကြိုက်တဲ့ Subject တွေ ပြောင်းလိုက်တော့ သူ့အဖေဆူလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။
ဒါကြောင့် "နင်တို့က မိဘတွေ ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာကို ဘယ်လောက်တောင် ခံစားရလို့ ရေးကြီးခွက်ကျယ် လုပ်ပြီးမိဘအတင်းပြောရတာလဲ။ အဲလိုအတင်းပြောတဲ့နေရာမှာပဲ ခင်ကြဆိုတော့ မိဘအတင်းပြောလို့ ကောင်းကျိုးရတယ်များ ထင်နေလားဆိုတော့ " ကောင်းတော့ တော်တော်ကောင်းတယ် မေမေ ဝေလျှံနဲ့ စကားပြောရတာ စိတ်ပေါ့သွားပြီးတော့ အရမ်း ရယ်ရတယ်၊ သြစတြေးလျားမှာ ကြီးတဲ့ဗမာကလေးတွေထဲမှာ ဗမာလိုကို ဗမာလူကြီးတွေနဲ့ တူအောင် လိုက်တုပြီး နိုင်ငံခြားအသံ လုံးဝမ၀ဲဘဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင် ပြောနိုင်တာ ရွယ်တူတွေထထဲမှာ ဝေလျှံကို ဘယ်သူမှ မမီဘူး" ဆိုတာနဲ့ အစချီပြီး ပြောပြတယ်။ သားက ကျွန်မတို့ လင်မယား ပြောတာတခါမှမကြားဖူးတဲ့ ဗမာလို ဘန်းစကားတွေကို ဝေလျှံဆီက အများကြီးသိရတယ်ဆိုပြီး ဝေလျှုံအဖေ ဝေလျှံကိုဆူတဲ့ပုံကို ဝေလျှံက သူ့ကိုပြောပြပြီး ကျွန်မသူ့ကို ဆူတဲ့ပုံကို ဝေလျှံကို သူက ပြန်ပြောလို့ အဲဒီတုန်းက စိတ်ဖိစီးတာတွေ ပေါ့သွားကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မသားက သူ့ကိုကျွန်မ ဘယ်လိုဆူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝေလျှံကို ပြောပြတာ ဘယ်လောက် တူမတူတော့ မသိဘူး။ ဝေလျှံပြောပြတဲ့ပုံအတိုင်း ဝေလျှံအဖေ သူ့သားကို ဆူပုံကို သားကျွန်မကို ပြန်ပြောပြတဲ့ ပုံကတော့ ဝေလျှံအဖေရဲ့ပုံရော အသံကိုပါ မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်လို့ရတယ်။
ဝေလျှံအဖေက အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါ။ ဝေလျှံက ကျွန်မသား မောင်တိုးလိုပဲ အထက်တန်းမှာ အမြင့်ဆုံးအဆင့် သင်္ချာကို ယူထားရာကနေ အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဝေလျှံက သူ့အဖေကို အဲဒီ Subject ပြောင်းမယ်လို့ ပြောတော့ သူ့အဖေက " ဘာပြောတယ် .. မင်းဘာပြောလိုက်လဲ ဝေလျှံ၊ ပြန်ပြောစမ်း ငါ့ကို အဲဒီစကား၊ (ဝေလျှံကလည်း မေးတိုင်း တခုခု ပြန်ပြောတယ်)၊ ဘာပြောတယ် ပြန်ပြောစမ်း. မင်းဘာထင်နေလဲ ဝေလျှံ၊ နားပန်ကျင်းထည့်လိုက်ရမလား၊ မင်းနားရင်းပူသွားချင်လား၊ မင်းထမင်းဘာနဲ့ စားမလဲ။ အဲဒီ Subject နဲ့ထမင်းစားလို့ ဖြစ်မလား၊ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားစမ်းပါ၊ မင်းဦးနှောက်ထဲမှာ ဘာတွေရှိသေးလဲ ငါ့ကိုပြောစမ်း" ဆိုပြီး ပြောတော့ ဝေလျှံကလည်း မေးခွန်းတခုပြီးတခု သူ့အဖေဘာကိုဆိုလိုမှန်း မသိ သူဖြေချင်တာ ဖြေတော့ သူ့အဖေကပိုစိတ်တို၊ မသိတဲ့စကားလုံးဆိုရင်လည်း ဘာပြောလဲအဖေနဲ့ ပြန်မေးလိုမေး၊ ထမင်းဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင် ကြက်သားနဲ့ စားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မေးတာနဲ့ ဖြေတာတခြားစီတွေ ဖြစ်နေတာကို သားက ကျွန်မကို ပြန်ပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ ဝေလျှံပြောတာလည်း မလွန်ဘူး အဲဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ Subject ပြောင်းတာနဲ့ ဘာမှလည်း ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး ပြောပြီး တဟားဟားနဲ့ ရယ်နေလို့ အဲဒီမေးခွန်းတွေက Subject ပြောင်းတာနဲ့ ဆိုင်တယ် နင့်သူငယ်ချင်း ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေနေ ပြန်မေးနေတာတွေကမှ မဆိုင်တာလို့ ပြောပြီးကျွန်မလလည်း သားသရုပ်ဆောင်ကောင်းအားကြီးလို့ ဝေလျှံတို့သားအဖပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ အူကိုနာသွားလို့ ဆက်ပြီးအပြစ်မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်မသား မောင်တိုးက ဝေလျှံထက်ပိုဆိုးတယ် ဝေလျှံကမှက မပြောင်းခင် သူ့အဖေကို Subject ပြောင်းတော့မည့်အကြောင်း ပြောဖေါ်ရသေးတယ် သားကတော့ အဲဒီတုန်းက ပြောင်းပြီးမှ အမေ သား Extension English ကနေ Advanced English နဲ့ Law, ကို Extension Maths ကနေ General Maths ကို Biology ကနေ Business ကို Subject ပြောင်းလိုက်ပြီ ဆိုပြီး ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားလာလို့ မောင်တိုး ဘာတွေလျှောက်နေလဲ မေမေသဘောမတူဘူး သင်္ချာကို General မလုပ်နဲ့ Advanced ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ Standard လုပ်ပါ၊ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေလည်း မေမေ သဘောမတူဘူးဆိုတာ အခုချက်ချင်း နင့်ကျောင်းအုပ်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီးပြောမယ် ပြောတော့ မေမေတယောက်ပဲ သဘောမတူတာ သားလည်းသဘောတူတယ် ဆရာဆရာမတွေလည်း သဘောတူတယ်၊ ကျောင်းအုပ်လည်း သဘောတူလို့ ပြောင်းလိုက်ပြီ ဖုန်းမခေါ်နဲ့တော့ ထူးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးပြောလို့ ဖုန်းထဲမှာလည်း ရန်ဖြစ် အိမ်ရောက်တော့လည်း တခါ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မလည်းသားကို နင်လုပ်ချင်ရာ လျှောက်လုပ်မနေနဲ့ နင်ယူထားတဲ့ Subject တွေမှာ ထမင်းစားလို့ရတဲ့ Subject ဘာကျန်သေးလို့လဲ မေးတော့ ကိစ္စမရှိဘူး သားကထမင်းမှ မကြိုက်တာ ထမင်းမစားရလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပြောလို့ မောင်တိုးနော် နင်ငါ့ကို ထော်လော်ကန့်လန့် မပြောနဲ့ ငါရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ဆိုပြောပြီး တခါမှလည်း မရိုက်ထည့်ဘူး ကျွန်မက ပြောတဲ့အကြောင်းကို ဝေလျှံကို သူကပြောပြတယ်။ ဝေလျှံကလည်း သူ့အဖေက သူ့ကိုငါ နားပန်ကျင်းထည့်လိုက်ရင် နားရင်းပူသွားမယ် ပြောပြီး တခါမှလည်း မကျင်းထည့်ကြောင်း မိဘတွေအကြောင်းကို အတင်းပြောပြီး ရယ်တဲ့နေရာမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ရင်းနှီချစ်ခင်ကြပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာတယေက်ရဲ့သားနဲ့ သင်္ချာကို Advanced Level အဆင့်ယူခဲ့တဲ့ အမေတယောက်ရဲ့သားတွေက အမြင့်ဆုံး ယူထားရာကနေ ကြားမှာ Advanced and Standard နှစ်ခု ရှိလျက်နဲ့ အနှိမ့်ဆုံး General သင်္ချာအဆင့်ကို ယူလိုက်ကြတဲ့အပေါ် မိဘတွေရဲ့ ရုတ်တရက်ခံစားမှုကို နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့သဘောအတိုင်းပဲ ကျေနပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ သူတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှိတဲ့အတွက်တော့ ၀မ်းသာပေးရပါတယ်။ ဗမာကလေးနှစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ကျောင်းမှာ နှစ်ယောက်စလုံး ကျောင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆုကို ချီြးုမှင့်ခံရတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဆုရတဲ့နှစ်တုန်းကတော့ ကျွန်မသား ရတာပဲကျွန်မသိပြီး တချိန်တည်းမှာပဲ ဝေလျှံပါ ရခဲ့တယ်ဆိုတာကို မပြောပြလို့ မသိလိုက်ဘူး။ ဘာကြောင့်မပြောပြလဲ မေးတော့ ပြောပြရင် " မေမေတို့က Show off လုပ်မယ်ဆိုတော့ သားတို့ Privacy ထိခိုက်တယ်" တဲ့။ အဲဒါကြောင့် အဲဒါမျိုးက ကြွားတာမဟုတ်ဘူးသား ဗမာဆိုလို့ သားတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပြီး နှစ်ယောက်စလုံး ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မိဘတွေအတွက်သာမဟုတ် ဗမာကွန်မြူနီတီအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်သား အရာရာတိုင်းကို ကြွားတယ်လို့ မသတ်မှတ်ရဘူးလို့ ပြောပြတယ် ဒါမေပဲ့ ကလေးတွေက လက်မခံဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်က သူတို့ယူထားတဲ့ Subject တွေမှာ Top ထဲမှာပါတယ်လို့တော့ မိဘတွေ ကျေနပ်အောင် ပြောကြတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ဒီနှစ်ပြီးရင်တော့ ရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ အားကစား ပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
၂၄ ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းအဓိပ္ပာယ် (၂)
Sunday, May 29, 2016 Nge Naing 1 comment
အပိုင်း (၁) ဟေတုပစ္စည်းမှ ပူရေဇာတပစ္စည်းအထိကို ဒီနေရာမှာ http://nge-naing.blogspot.com.au/2016/05/blog-post.html ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း (၂) ပစ္ဆာာဇာတပစ္စည်း မှ အ၀ိဂတပစ္စည်းအထိ
မြတ်စွာဘုရားက ဒီတလောကလုံးမှာ ၂၄ ပစ္စည်းနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်နေပျက်နေတာတွေကို ညာဏ်ကျက်စားပြီး ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရောင်ခြည်ခြောက်သွယ် ကွန့်မြူလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပုံ ပန်းချီကားတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ မျက်နှာပတ်ပတ်လည်မှာ ဖြာထွက်နေတဲ့ ရောင်ခြည်တွေက ပဋ္ဌာန်းကြောင့် ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ပဋ္ဌာန်းရဲ့ တန်ခိုးကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၅ ဇန်န၀ါရီက စင်္ကာပူမှာ ဟောပြောထားတဲ့ ရုပ်သံတခုမှာ ပြောထားတာက ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကနေ အခုထိ ဆရာကြီးက ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာ တနေ့မှ မပျက်သေးဘူး၊ တရားစခန်း ၀င်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်း စင်္ကြံလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ ရွတ်ပါတယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ကဗျာတပုဒ်ကိုတောင် အဓိပ္ပာယ်မသိရင် အလွတ်ကျက်လို့ မရတတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ပဌာန်းကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကနေ အခုထိ အနှစ် ၃၀ နီးပါး ရွတ်လာခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ အလွတ်မရခဲ့ဘူး။
အရင်ကာလ တလျှောက်လုံး ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်ကို ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့ရာကနေ မမျှော်လင့်ဘဲ ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ပစ္စည်းပိုင်းမှာ ရှင်းလင်းထားတဲ့ ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်ကို နားထောင်မိပြီးတာနဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းမှာ ဘာအချက်တွေပါတယ်ဆိုတာကို မှတ်လိုက်ရုံနဲ့ ၂၄ ပစ္စည်းပဌာန်းကို ချက်ချင်းအလွတ်ရသွားတော့ ဆရာကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲ ရွတ်လည်း ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ အဓိပ္ပာယ်သိပြီး ရွတ်ရင်တော့ တရားရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ တရားကရတဲ့ ပီတိက ရင်ထဲအထိ စိမ့်ဝင်သွားပြီး မှတ်ညာဏ်ထဲမှာလည်း အမြဲရှိနေတဲ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲ ရွတ်တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ကုသိုလ်ပိုရပြိး အကျိုးပိုရှိမှာ သေချာပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ် မသိဘဲ ရွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ သိပြီးရွတ်သည်ဖြစ်စေ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကို ပုံမှန် ရွတ်သူတိုင်း သိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဟေတုပစ္စည်းမှ ပူရေဇာတပစ္စည်းအထိ အပိုင်း (၁) ကို မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိကို နေရာတိုင်းမှာ ရှာလို့ ရနိုင်တဲ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၁။ ပစ္ဆှာာဇာတပစ္စယသတ္တိ ကျေးဇူးပြုပုံ - နောက်ဖြစ်သောတရားက ရှေ့ဖြစ်သောတရားကို ကျေးဇူးပြုခြင်း
နောက်မှဖြစ်ကြသော စိတ်စေတသိတ်တို့သည် ရှေ့၌ဖြစ်နှင့်သော ဤ၀တ္တုရုပ်အစုတို့အား (၀တ္ထု ၆ ပါး = စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာ၊ ကာယ၊ ဟဒယ) ပစ္ဆာာဇာတ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။ (စိတ်စေတသိတ်တွေက ၀တ္ထု တခုခုကို မှီပြုပြီးမှ ဖြစ်လာပြီး အဲဒီ ၀တ္တုကြောင့် နောက်မှဖြစ်လာတဲ့ စိတ်စေတသိတ်တွေကပဲ သူတို့အမှီပြုခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတွေကို ဆက်လက်တည်တံ့နေနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်ပြီး ကျေးဇူးပြုတာကို ပစ္ဆာဇာတသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း ဖြစ်တယ်။)
၁၂။ အာသေ၀နပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - အထုံအဟုန်ပေး၍ ကျေးဇူးပြုခြင်း
- ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်ဇောနှင့် စေတသိတ်တို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်ဇောနှင့် စေတသိတ်တို့ကို အထုံအဟုတ်ပေး၍ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်ဇောနှင့် စေတသိတ်တို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်ဇောနှင့် စေတသိတ်တို့ကို အထုံအဟုတ်ပေး၍ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
- ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကြိယာဇောနှင့် ဖိုလ်ဇောတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကြိယာဇော်နှင့် ဖိုလ်ဇောတို့ကို အထုံအဟုတ်ပေးသည့်အနေဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၃။ ကမ္မပစယောတိ- ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း- မျိုးစေ့သည် အပင်သစ်တခု ဖြစလလာစေသကဲ့သို့ ကံတရားသည် ဘ၀အသစ်တခုဖြစ်လာစေရန် ဘ၀အသစ်တခု ဖြစ်လာစေရန် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ကုသိုလ်ကံနှင့် အကုသိုလ်ကံတို့သည် ၀ိဘက်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးနှင့် ကတဋာရုပ် (ဥတုဇရုပ်+ကမ္မဇရုပ်) တို့ကို ဖြစ်လာစေရန် ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့် (မျိုးစေ့မှ အပင်ဖြစ်လာစေသကဲ့သို့) ဘ၀အသစ်တခုဖြစေလာရန် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စေတနာဟူသော ကံတရားသည် ၄င်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေတသိတ်တို့ကြောင့် ဖြစ်လာစေသော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့် ဘ၀အသစ်တခု ဖြစ်ရန်ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၄။ ၀ိပါကပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း - ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ကံအကျိုးကြောင့် ဖြစ်လာသော ၀ိပါက်စိတ်နှင့်စေတသိတ် နာမ်ခန္ဒာလေးပါးတို့သည် အပြန်အလှန်တခုကိုတခု အေးအေးလူလူ ဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၅။ အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - အိမ်အိုအား ကျားကန်ပေးသကဲ့သို့ ကျေးဇူးပြုခြင်း
- ကာဗဠ်ိကာရောခေါ် ၀ါးမျိုစားသောက်ရသည့် (ရုပ်) အာဟာရသည် ဤရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အား အားဖြည့်ပြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ထောက်ပံ့၍ အာဟာရသတ္တိဖြင့် (အိမ်အိုအားကျားကန်ပေးသကဲ့သို့) ဆက်လက်ရှင်သန်နေစရန် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
- နာမ်အာဟာရ သုံးမျိုးသည် (ဖဿ ၊ စေဒနာ၊ ၀ိညာဏ) ၄င်းတို့နှင့်တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း ထိုစိတ်စေတသိတ်တို့ကြောင့် ဖြစ်လာစေသော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် (အိမ်အိုအားကျားကန်ထားပေးသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၆။ အိန္ဒြိယပစ္စယောတိ- အိန္ဒြိယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ အစိုးရအောင် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-စက္ခုဟူသော အမြင်အိနြေ္ဒသည် မြင်သိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့်တပါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို ဖြစ်လာစေရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး မြင်သိမှုကို အစိုးရသည်။
-သောတဟူသော အကြားအိနြေ္ဒသည် ကြားသိစိတ်နှင့် ၄င်းတို့နှင့် ပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အား ဖြစ်လာစေရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ကြားသိမှုကို အစိုးရသည်။
-ဃာနဟူသော အနံ့ခံအိနြေ္ဒသည် ၄င်းနှင့်တပါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အား ဖြစ်လာရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး နံသိမှုကို အစိုးရသည်။
-ဇိဝှာါသူသော အရသာအိနြေ္ဒသည် ၄င်းနှင့်တပါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အား ဖြစ်လာရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး စားသိမှုကို အစိုးရသည်။
-ကာယဟူသာထိတွေ့မှုအိနြေ္ဒသည် ၄င်းနှင့်တပါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အား ဖြစ်လာရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ထိသိမှုကို အစိုးရသည်။
-ရုပ်ဇိဝိဟူသော အိနြေ္ဒတရားသည် ကတဋာရုပ် (ကမ္မဇရုပ်နှင့် ဥတုဇရုပ်) တို့ကို ဖြစ်လာစေရန် အိန္ဒြိယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး သက်တမ်းပြည့်တည်အောင် စောင့်ထိန်းပေးသည်။
-ရုပ်မဟုတ်သော နာမ်အိနြေ္ဒတရားတို့သည် ၄င်းနှင့် ယှဉ်ဘက်စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ၄င်းစေတသိတ်များကြောင့် ဖြစ်လာစေသော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အိနြ္ဒိယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် အစိုးရအောင် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၇။ဈာနပစ္စယောတိ- ဈာနပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - ပစ္စယုပ္ပံတရားတို့အား အာရုံသို့ စူးစိုက်စွာ ရှုစေခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ဈာနင်တရားခေါ် ဈာန်အင်္ဂါတို့သည် ၄င်းတို့နှင့် တပါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေတသိတ်တို့ကြောင့် ဖြစ်လာစေသော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အာရုံကိုစူးစိုက် ရှုနိုင်အောင် ဈာနပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၈။ မဂ္ဂပစ္စယောတိ- မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
- မဂ္ဂင်တရားတို့သည် ၄င်းတို့နှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ် ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်၊ ၄င်းစေတသိတ်တို့ကြောင့် ဖြစ်လာစေသော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယောတိ- သပ္ပယုတ္တပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း - အပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်လျက် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-နာမ်ခန္ဓာလေးပါးဖြစ်သည့် စိတ်နှင့်စေတသိတ်တို့သည် အပြန်အလှန် တခုကိုတခု အတူဖြစ်အောင် သမ္ပယုတ္တပစ္စယ သတ္တိဖြင့် တပေါင်းတည်း ဖြစ်အောင် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၂၀။ ၀ိပ္ပယုတ္တပစ္စယောတိ- ၀ိပ္ပယုတ္တပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း - မရောနှောဘဲ ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ရုပ်တရားတို့သည် နာမ်တရားတို့အားလည်းကောင်း၊ နာမ်တရားတို့သည် ရုပ်တရားတို့အားလည်းကောင်း ရောနှောခြင်းမရှိဘဲ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၂၁။ အတ္ထိပစ္စယောတိ- အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း
-နာမ်ခန္ဓာလေးပါး (စိတ်၊ စေတသိတ်) တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုကြပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါး ဖြစ်သည့် ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယော တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ပဋိသန္ဓေတည်စဉ်အခါတွင် နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စိတ်၊ စေတသိတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာသောရုပ်၊ စိတ္တဇရုပ်တို့ကို အထင်အရှားရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါးဖြစ်သည့် ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ၀ါယော တို့သည် ၄င်းတို့၏အမှီရုပ် ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စက္ခု ၀တ္တုခေါ် စက္ခုပသာဒသည် (အဆင်း၊ မြင်ကွင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) မြင်သိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-သောတ၀တ္တုခေါ် သောတပသာဒသည် (အသံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) ကြားသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ဃာန၀တ္တခေါ် ဃာနပသာဒသည် (ရနံ့နှင့် ထိတွေ့သောအခါ) နံသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှားရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ဇိဝှါဝတ္တုခေါ် ဇိဝှါပသာဒသည် (အစာအရသာနှင့် ထိတွေ့သောအခါ) စားသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှားရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ကာယ၀တ္ထုခေါ် ကာယပသာဒသည် (အထိအတွေ့နှင့်ကြုံတွေ့သောအခါ) ထိသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရူပါရုံခေါ် အမြင်အာရုံသည် မြင်သိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှားရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-သဒ္ဒါယတနံခေါ်အကြားအာရုံသည် ကြားသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို ဖြစ်လာစေရန် အထင်အရှားရှိခြင်းမြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ဂန္ဓာယတနံခေါ် အနံ့ခံအာရုံသည် နံသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို ( ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရသာယတနံခေါ် ရသအာရုံသည် စားသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို( ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
- ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံခေါ် အထိအတွေ့အာရုံသည် ထိသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို ( ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ နှင့် အထိအတွေ့အာရုံတို့သည် မနောဓာတ်သုံးပါး (ပဉ္စဒွာရ၀စ္စန်း၊ သံပဋိစ္ဆိုင်း၊ ဒွေး) နှင့် ၄င်းတို့နှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ စိတ်စေတသိတ်တို့ ကို ဖြစ်လာစေရန် အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အကြင်(ဟာဒရ၀တ္တု) ရုပ်ကို အမှီပြု၍ မနောဓာတ်သုံးပါးနှင့် မနောဝိညာဏဓာတ် ၇၆ ပါးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထို (ဟဒရ၀တ္တု) ရုပ်သည် မနောဓာတ်သုံးပါး၊ မနောဝိညာဏဓာတ် (၇၆) ပါးနှင့် ၄င်းတို့နှင့် တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တွေကိုပါ (ဖြစ်လာစေရန်) အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်။
၂၂။ နတ္ထိပစ္စယောတိ- နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - မရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ကောင်းစွာအခြားမရှိဘဲ ချူပ်ငြိမ်းသွားကြသော စိတ်စေတသိတ်တို့သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်လာသော(ပဋပ္ပန္နာနံ) စေတသိတ်တို့အား မရှိခြင်းမြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၂၃။ ၀ိဂတပစ္စယောတိ- ၀ိဂတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း - ကင်းချူပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
--ကောင်းစွာအခြားမရှိဘဲ ကင်းချူပ်သွားကြသော စိတ်စေတသိတ်တို့သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်လာသော(ပဋပ္ပန္နာနံ) စေတသိတ်တို့အား ကင်းချူပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၂၄။ အ၀ိဂတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း- မကင်းချူပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း
အ၀ိဂတပစ္စယသတ္တိက အတ္တိပစ္စယ သတ္တိနဲပ အားလုံးတူပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတ္တိအစ္စယ သတ္တိကို ပြန်သွားပြီး ၀ါကျအားလုံးက "အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူြး့ပုသည်" နေရာမှာ "မကင်းချူပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်" လို့အစားထိုး သွားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ဟောပြောချက် မူရင်းကို ဒီနေရာ <https://www.youtube.com/watch?v=OZ8ukhaWfYw> မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆရာကြီးကျန်းမာ ချမ်းသာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစွာနဲ့ သက်တော်ရာကျော်တဲ့အထိ တရားဓမ္မတွေကို မဂ်ဖိုလ်ရတဲ့အထိ ပွားများပြီး သာသနာပြုနိုင်ပါစေ-
၂၄ ပစ္စည်း ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ် (၁)
၂၄ ပစ္စည်း ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်
၂၄ ပစ္စည်း ပဌာန်းကို အဓိပ္ပာယ် တိတိကျကျ မသိဘဲ ကျွန်မ ရွတ်လာတာ အနှစ်သုံးဆယ်နီးပါး ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်မဘ၀မှာ အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ ဒီလောက်အကြာကြီး ရွတ်လာတဲ့ ဘုရားစာဆိုလို့လည်း ပဌာန်းတခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ချင်လို့ ဘုရားစာအုပ်တွေ ပဌာန်းအကြောင်း ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ တွေ့တိုင်းလည်း အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတွေ့ရတဲ့ ဟောပြောချက်ရော ရေးသားချက်တွေ အားလုံးမှာ ၂၄ ပစ္စည်းရဲ့ ကျေးဇူးပြုပုံတွေနဲ့ သဘောသဘာဝတွေကိုပဲ အကျယ်အနေနဲ့ ရေးသား/ဟောပြောထားတာကိုသာ တွေ့ရပြီး ကျွန်မတို့ ရွတ်ဆိုနေတဲ့ ပါဠိအတိုင်း တပိုဒ်စီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ ဟောထား ရေးထားတာ ဘယ်နေရာမှာမှ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။
အခုတော့ ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ၂၄ ပစ္စည်းပဌာန်း အဓိပ္ပာယ်အပြင် အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုပါ လေ့လာခွင့်ရလိုက်လို့ ဆရာကြီးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ဆယ်ကျော်သက်ကာလမှာ ဘာသာတရားဆိုတာကို စမ်းတ၀ါးဝါးဘ၀ကနေ ဆရာကြီးရေးတဲ့ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများ စာအုပ်ကို ဖတ်မိပြီး ကံကံ၏အကျိုးနှင့် ဘ၀သံသရာကို စတင်ယုံကြည်လာပြီး ဘုရားတရားကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်လာခဲ့တာလည်း ဆရာကြီးကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်သလို အနှစ်နှစ်အလလ ရှာဖွေနေတဲ့ ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့ အဘိဓမ္မာအကြောင်းကိုလည်း ဆရာကြီးဆီကပဲ ရလိုက်တဲ့အတွက် ဆရာကြီးရဲ့ ကျေးဇူးတွေက ကျွန်မဆီမှာ သံသရာတလျှောက်လုံး ဆပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဆပ်ကုန်မယ်မထင်ဘူး။ ဤလောကမှာ လူ့ဥစ္စာ သဒ္ဒါအမြတ်ဆုံးပါ ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ လက်သုံးစကားအတိုင်းပဲ သဒ္ဒါတရားအကြောင့် ရတဲ့ပီတိဟာ ဘာပီတိနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရနိုင်တာအမှန်ပဲ။ အောက်က ကောက်နှုတ်ချက်က ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရား စည်ပင်သာယာ ဓမ္မာရုံမှာ ကျင်းပတဲ့ ဆယ်ရက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းမှာ ဆရာကြီး ဟောပြောထားတဲ့ ပစ္စည်းပိုင်းမှာ ဆရာကြီးရှင်းပြထားတဲ့ ပဌာန်း အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစကားပြေ အရေးအသားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ထားပါတယ်။ ပဌာန်းပါဠိကို နေရာတိုင်းမှာ ရှာလို့ရနိုင်တာမို့ မထည့်တော့ဘဲ အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်မ fb မိတ်ဆွေထဲမှာ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဘာသာရေးနားလည်သူတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် မှားယွင်းချွတ်ချော်နေတာတွေ တွေ့ရင် ဘယ်သူမဆို မှတ်ချက်မှာဖြစ်စေ Message Box ကဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရင်း ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်ကို ဗုဒ္ဓနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သံလျင်ဖားအောက်တောရမှာ တရားဘ၀နာ ပွားများရှုမှတ်နေတယ်လို့ သိရတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် သက်တော်ရာကျော်တိုင်အောင် ကျန်းမာချမ်းသာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစွာနဲ့ သာသနာပြုနိုင်ပြီး မဂ်ဖိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အထိ တရားရှုမှတ် ပွားများပြီး သာသနာပြုနိုင်ပါစေ..
ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ် အပိုင် (၁) (ဟေတုပစ္စည်းမှ ပူရေဇာတပစ္စည်းအထိ)
၁။ ဟေတုပစ္စယောတိ - ဟေတုပစ္စယသတ္တိ ကျေးဇူးပြုပုံ
ဟေတုသူသော အဟိတ်ခြောက်ပါးသည် ၄င်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော တရားများဖြစ်သည့် စိတ်စေတသိတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ထိုစိတ်စေတသိတ်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောတရား- စိတ္တဇရုပ် တို့ကိုလည်းကောင်း ဟေတုပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ရေသောက်မျှစ်သည် သစ်ပင်အား မြဲမြံခိုင်ခန့်သန်စွမ်းစွာ တည်နေအောင် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့ ) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၂။ အရမ္မဏပစ္စယောတိ - အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိ ကျေးဇူးပြုပုံ
ရူပါရုံ- အမြင်အာရုံသည် (အဆင်း၊ မြင်ကွင်းနှင့် ထိတွေ့သောအခါ) မြင်သိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
သဒ္ဒါယတနံ- အကြားအာရုံသည် (အသံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) ကြားသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော တရားတရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ဂန္ဓာယတနံ- အနံ့ခံအာရုံသည် (ရနံ့နှင့်ထိတွေ့သောအခါ) နံသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ရသာယတနံ အရသာအာရုံသည် (အရသာနှင့် ထိတွေ့သောအခါ) စားသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ အထိအတွေ့အာရုံသည် (အထိအတွေ့နှင့် ကြုံသောအခါ) ထိသိစိတ်နှင့် ယင်းနှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ တရား- စိတ်စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ နှင့် အထိအတွေ့အာရုံ ငါးပါးတို့သည် မနောဓာတ်သုံးပါး (ပဉ္စဒွာရ၀စ္စန်း၊ သံပဋိစ္ဆိုင်း၊ ဒွေး) နှင့် ၄င်းတို့နှင့်တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သာ စိတ်စေတသိတ်တို့ ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အလုံးစုံသောတရား (အာရုံခြောက်ပါးတရား) တို့သည် မနောဝိညာဏဓာတ် (မနောဝိညာစိတ် ၇၆ ပါး) နှင့် ယင်းတို့နှင့် တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) အရမ္မဏသတ္တိ ဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အား ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အကြင်ကြင်တရားတို့ (ယံယံဓမ္မံ) ကို အာရုံပြု၍ အကြင်ကြင်တရား စိတ်စေသိတ်တို့ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုထိုအာရုံတို့သည် ယင်းတို့ကို အာရုံယူပြီး ဖြစ်လာသည့် စိတ်စေတသိတ်တို့အား အရမ္မဏ ပစ္စယသတိဖြင့် (ကြိုးတန်းနှင့် တောင်ဝှေးတို့သည် မစွမ်းမသန်သူတို့အာ ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၃။ အဓိပတိပစ္စယောတိ- အဓိပဓိ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပုံ - ပြိုင်ဘက်မရှိအကြီးအကဲအဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ဆန္ဒဟူသောအဓိပတိရားသည် ထိုဆန္ဒနှင့် တပါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေသိတ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ္တဇရုပ်များအားလည်းကောင်း အဓိပဓိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် (ရှေ့ဆောင်အကြီးအကဲအဖြစ်) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-၀ိရိယဟူသော အဓိပတိတရားသည် ထိုဝိရိယနှင့်တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေသိတ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ္တဇရုပ်များအားလည်းကောင်း အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် (ပြိုင်ဘက်မရှိ အကြီးအကဲအဖြစ်) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စိတ်ဟူသော အဓိပတိတရားသည် ထိုစိတ်ဆန္ဒနှင့်တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ် တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေသိတ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်တရား-စိတ္တဇရုပ်များအားလည်းကောင်း အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် (ပြိုင်ဘက်မရှိ အကြီးအကဲအဖြစ်) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-၀ိမံသ - ပညာ ဟူသော အဓိပတိတရားသည် ထိုပညာနှင့် တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စိတ်စေတသိတ် တို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်စေသိတ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ္တဇရုပ်များအားလည်းကောင်း အဓိပဓိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် (ပြိုင်ဘက်မရှိ အကြီးအကဲအဖြစ်) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-အကြင်ကြင်တရားတို့ (ယံယံဓမ္မံ) ကို အလေးအမြတ်ပြု၍(ကတုံကတွာ) အကြင်ကြင်တရား စိတ်စေတသိတ်တို့ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုထိုအာရုံတို့သည် ယင်းတို့ကို အလေးအမြတ်ပြုပြီး ဖြစ်လာသည့် စိတ်စေတသိတ်တို့အား အဓိပတိ ပစ္စယသတိဖြင့် (ပြိုင်ဘက်မရှိ အကြီးအကဲအဖြစ်) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၄။ အနန္တရပစ္စယပစ္စယောတိ- အနန္တရသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပုံ - အခြားမရှိဘဲ ကျေးဇူးပြုခြင်း
စက္ခုဝိညာဏဓာတ်- မြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိတ်တို့ချုပ်သွားသောအခါ မနောဓာတ်သုံးပါးအနက် သမ္ပဋီစ္ဆိုင်း (အာရုံလက်ခံစိတ်)နှင့် ၄င်း၏ယှဉ်ဘက်စေတသိတ်တို့ အခြားမရှိဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရသတ္တိဖြင့် (ဘုရင်နတ်ရွာစံပါက သားကြီးအိမ်ရှေ့မင်းသား အလိုလျောက်ဘုရင်ဖြစ်လာသကဲ့သို့) အခြားမရှိဘဲ ကျေးဇူးပြုပါသည်။ မနောဓာတု- မနောဓာတ် သံပဋိ စ္ဆိုင်း (အာရုံလက်ခံစိတ်) နှင့် ၄င်း၏ယှဉ်ဘက်စေသိတ်တို့ ချူပ်သွားသောအခါတွင်လည်း မနောဝိညာဏ်ဓာတ် အမည်ရသော သန္တိရဏစိတ် (အာရုံစူးစမ်းစိတ်) နှင့် ၄င်း၏ယှဉ်ဘက်စေသိတ်တို့ကို အနန္တရသတ္တိဖြင့် အခြားမရှိဘဲ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
- သောတ၀ိညာဏဓာတ်- ကြားသိစိတ် (အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ပြန်ကောက်ပြီး သောတဖြင့် အစားထိုးရန်)
ဃာဏ၀ိညာနဓာတ် - နံသိစိတ် (အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ပြန်ကောက်၍ ဃာနဖြင့် အစားထိုးရန်)
ဇိဝှာါဝိညာဓာတ်- စားသိစိတ် (အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ပြန်ကောက်၍ ဇိဝှာဖြင့် အစားထိုးရန်)
ကာယ၀ိညာဏဓတ်- ထိသိစိတ် (အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ကောက်၍ ကာယဖြင့် အစားထိုးရန်)
- ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာရန် အနန္တရ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက် ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို အခြားမလှပ်ဘဲ ဖြစ်လာစေရန် အနန္တရသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
(ယေသံယေသံ ဓမ္မာနံ) အကြင်ကြင်တရားတို့ ချူပ်သွားသည်နှင့် အခြားမလပ်ဘဲ နောက်စိတ်စေတသိတ်တွေ ဖြစ်လာရန် ယင်းရှေ့မှာခူပ်သွားသော စိတ်စေတသိတ်တို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်လာသည့် စေတသိတ်တို့ကို ဆက်ကဲဆက်ကဲ အခြားမလပ်ဘဲ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
(စာကြွင်း- စိတ်၊ စေတသိတ်၊ ၀ီထိ၊ ဇော စသည်တို့ကိုနားလည်ရန်အတွက် အဘိဓမ္မာကို လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။)
၅။ သမနန္တရပစ္စယောတိ- သမနန္တပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
အနန္တရက အခြားမရှိ ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး သမနန္တရက ကောင်းစွာအခြားမရှိကျေးဇူးပြုခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ကျေးဇူးပြုပုံအားလုံး အတူတူပင်ဖြစ်၍ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ဆိုရာမှာ အနန္တရနေရာတွင် သမနန္တရဟူ၍ အစားထိုးသွားရန်သာလိုသည်။
၆။ သဟဇာတပစ္စယောတိ- သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပုံ၊ အတူတကွ ကျေးဇူးပြုခြင်း
-နာမ်ခန္ဓာလေးပါး (စိတ်၊ စေတသိတ်) တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အတူတကွ ဖြစ်စေရန် သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ဆီမီးထွန်းညှိလိုက်သည်နှင့် အလင်းတပြိုင်နက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ အကြောင်းတရား ဖြစ်သည်နှင့် အကျိုးတရားတပြိုင်နက်ဖြစ်လာစေရန် ကျေးဇူးပြုခြင်း) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါး (ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယော) တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အတူတကွ ဖြစ်ရန် သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် (ဆီမီးထွန်းသည်နှင့် အလင်းတပြိုင်နက်ရသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ပဋိသန္ဓေတည်စဉ် ခဏတွင် နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည် တခုနှင့်တခု အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အတူတကွ ဖြစ်ရန် သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ( ဆီမီးထွန်းသည်နှင့် အလင်းတပြိုင်နက်ရသကဲ့သို့) ကျေးဇူးပြုပါသည်။
စိတ်၊ စေတသိတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာသောရုပ်- စိတ္တဇရုပ်တို့ကို အတူတကွ ဖြစ်လာစေရန် သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါး (ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ၀ါယော) တို့သည် ၄င်းတို့၏အမှီရုပ်တို့ကို အတူတကွ ဖြစ်လာစေရန် သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ရုပ်တရားတို့သည် နာမ်တရားတို့ကို တချို့သောအခါမှာ အတူတကွဖြစ်အောင် သဟဇာတသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသော်လည်း တချိူ့သောအခါတွင်မူ အတူတကွဖြစ်အောင် သဟဇာတသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးမပြုပါ။
၇။ အညမညပစ္စယောတိ- အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း။ (အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုခြင်း)
-နာမ်ခန္ဓာလေးပါး ဖြစ်သည့် စိတ်စေတသိတ်တို့သည် တခုကိုတခု အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုကြသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါး- ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ၀ါယော တို့သည် တခုကိုတခု အချင်းအချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုကြသည်။
-ပဋိသန္ဓေအခါ နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည် တခုကိုတခု အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုကြသည်။
၈။ နဿိ ယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း။ မှီရာအဖြစ်ကျေးဇူးပြုသည်။
-နာမ်ခန္ဓာလေးပါး (စိတ်၊ စေတသိတ်) တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုကြပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါး ဖြစ်သည့် ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယော တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ပဋိသန္ဓေတည်စဉ်အခါတွင် နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စိတ်၊ စေတသိတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာသောရုပ်၊ စိတ္တဇရုပ်တို့ကို မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-မဟာဘုတ်လေးပါးဖြစ်သည့် ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ၀ါယော တို့သည် ၄င်းတို့၏အမှီရုပ် ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-စက္ခု ၀တ္တုခေါ် စက္ခုပသာဒသည် (အဆင်း၊ မြင်ကွင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) မြင်သိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-သောတ၀တ္တုခေါ် သောတပသာဒသည် (အသံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) ကြားသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ဃာန၀တ္တခေါ် ဃာနပသာဒသည် (ရနံ့နှင့် ထိတွေ့သောအခါ) နံသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ဇိဝှါဝတ္တုခေါ် ဇိဝှါပသာဒသည် (အစာအရသာနှင့် ထိတွေ့သောအခါ) စားသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ကာယ၀တ္ထုခေါ် ကာယပသာဒသည် (အထိအတွေ့နှင့်ကြုံတွေ့သောအခါ) ထိသိစိတ်နှင့် ၄င်းနှင့် တပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တို့ကို (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အကြင်(ဟာဒရ၀တ္တု) ရုပ်ကို အမှီပြု၍ မနောဓာတ်သုံးပါးနှင့် မနောဝိညာဏဓာတ် ၇၆ ပါးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထို (ဟဒရ၀တ္တု) ရုပ်သည် မနောဓာတ်သုံးပါး၊ မနောဝိညာဏဓာတ် (၇၆) ပါးနှင့် ၄င်းတို့နှင့် တပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်သော စေတသိတ်တွေကိုပါ (ဖြစ်လာစေရန်) မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၉။ ဥပနဿ ယပစ္စယောတိ - အားကြီးသောမှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်း
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် နောက်နောက် ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အားကြီးသောမှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အဗျာကတတရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
-ရှေးရှေးဖြစ်ကြသော အဗျာကတရားတို့သည် နောက်နောက်ဖြစ်ကြသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ရာသီဥတုနှင့် ဗောဇဉ်အာဟာရတို့သည် အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတို့သည် အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
နေရာထိုင်ခင်းသည် အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
အပိုင်း (၂) ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းမှ အ၀ိဂတပစ္စည်းအထိ ကိုဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
မှတ်ချက်။ ပုံကို Google က ကူးယူဖေါ်ပြထားပြီး ဆရာကြီး ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ်က ဒီနေရာမှာ <http://dhammadownload.com/…/DrMehmTinMon-BuddhaAbbhidimaAhN…> ရှိပြီး ဆရာကြီး စည်ပင်ဓမ္မာရုံမှာ ဟောထားတဲ့ ပဌာန်း ရုပ်သံဖိုင်က ဒီနေရာ <https://www.youtube.com/watch?v=L4PQecMDRRs> မှာ ရှိပါတယ်။
ABSDF မကဒတ ၂၇ နှစ် မွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် Dr Myint Cho ပြောကြားသော ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက်
Sunday, November 01, 2015 Nge Naing7comments
“ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ပေးရမည့် ဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ ကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်အစိုးရခေတ်က ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းနဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်တွေ အများစုဖြစ်တဲ့အပြင် အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စံတွေကို မသိကြတဲ့အပြင် လိုက်နာအကောင်အထည် ဖေါ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း မဟုတ်ကြဘူး။ လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း မရှိတာကြောင့် ဘက်မလိုက်တဲ့ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မရှင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
အားလုံး မင်္ဂလာပါ အခုလိုအရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေး အခမ်းအနားမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ပြောကြားဘို့ ဘိတ်ကြားတဲ့ ABSDF သြစကြေးလျား ဌာနခွဲကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း အရင်ဆုံး ပြောကြားလိုပါတယ်။
အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း လာမည့်နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ (၉၃) ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုစုပေါင်း (၆၀၇၈) ဦးဟာ လွှတ်တော်နေရာ (၁၁၇၁) နေရာအတွက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်သလို ပြည်သူ (၃၂) သန်းကျော်ကလည်း မဲပေးကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြစကြေးလျား အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီး လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစေဘို့အတွက် ငွေကြေးနဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေ အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပေးနေကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း စေလွှတ်ထားကြပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အကန့်အသတ်ကြောင့် လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ မရိုးမသား လုပ်ရပ်နဲ့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ မမသာလုပ်ရပ်တွေကြောင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်သုံးသပ်ပါတယ်။ ကျနော်နည်းနည်း ထပ်ရှင်းချင်ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကို စစ်အစိုးရ အတည်ပြုထားတဲ့ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချူပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပရတာဖြစ်လို့ ဒီအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ နေရာ (၇၅) % ကိုသာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့် ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၂၅) % ကို ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်က ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေအတွက် နေရာချန်ထားပေးရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီကိုလည်း သမ္မတ ရွေးချယ်ခွင့် အစိုးရဖွဲ့ခွင့် တိုက်ရိုက်မပေးပါဘူး။ စစ်ဗိုလ် (၂၅) % နဲ့ထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ သမ္မတ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတဆင့် ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်က ထောက်ခံတဲ့ USDP ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ လွှ့တ်တော်နေရာ (၂၆)% ရရင်ပဲ စစ်တပ်က (၂၅) % ပေါင်းလို့ (၅၁) % ကျော်ရရင် စိတ်ကြိုက်သမ္မတရွေးခွင့်ရပြီ။ အဲဒီသမ္မတက ဆက်ပြီးအစိုးရသစ် ဖွဲ့နိုင်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD အနေနဲ့ အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်တွေမှာ ရော (၆၅)% ကျော်ရမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နေရာစုစုပေါင်းရဲ့ (၅၁) % ဖြစ်မှာမို့ အင်မတန်ခက်ခဲအောင် လုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ပေးရမည့် ဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ ကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်အစိုးရခေတ်က ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းနဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်တွေ အများစုဖြစ်တဲ့အပြင် အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စံတွေကို မသိကြတဲ့အပြင် လိုက်နာအကောင်အထည် ဖေါ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း မဟုတ်ကြဘူး။ လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း မရှိတာကြောင့် ဘက်မလိုက်တဲ့ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မရှင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ မဲစာရင်းတွေမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ အမှားအယွင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး ဒီကိစ္စကြောင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သန်းချီပြီး မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနေသလို သေဆုံးပြီးတဲ့သူတွေနဲ့ တခါမှ မရှိတဲ့သူတွေ နာမည်တွေ ပါနေတာကလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအတွက် ဒီမဲတွေကို ဖန်တီးပေးထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အတိုက်အခံ ပါတီတွေက အမတ်လောင်း (၁၀၀) နီးပါးကိုလည်း ရွေူးကောက်ပွဲ မ၀င်နိုင်အောင် ပယ်ဖျက်ထားသလလို ကချင်၊ ရှမ်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ တချို့မြို့တွေကိုလည်း လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါအပြင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အမတ်လောင်းတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမှာ လူထုကို ငွေ (၃၀၀၀) စီပေးတာ၊ ဒန်ပေါက်ကျွေးပြီး စည်းရုံးတာ သူတို့ပါတီကို မဲပေးရင် ကွန်ကရက် လမ်းခင်းပေးမယ်၊ မီတာပုံးတွေပေးမယ်၊ ဆိုလာပြားတွေပေးမယ်၊ မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ပြောဆိုစည်းရုံးတာတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ရာ ရောက်ပေမဲ့ အရေးမယူဘဲ လစ်လျှူ ရှုထားပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိဦးသိန်းစိန် အစိုးရကလည်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ဂတိပြုထားပေမဲ့ ဂတိအတိုင်း မလုပ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ဘက်ပေါင်းစုံ ပံ့ပိုးပေးနေချိန်မှာပဲ အတိုက်အခံ NLD ပါတီနဲ့ တခြားပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ်ချူပ်ချယ်ထားပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ထောက်ခံသူ လူဆိုးလူမိုက်တွေရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အပေါ် စော်ကားတိုက်ခိုက်တဲ့ အပြောအဆို၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖြန့်ပြီး NLD ကို မဲမထည့်ရအောင် လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အစိုးရက အရေးယူရမည့်အစား လစ်လျှူရှုထားပေးတယ်။ လွှတ်ထားပေးနေတယ်။ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်အောင် ဆွပေးနေတာကိုလည်း အရေးမယူဘဲ လွှတ်ထားပေးတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဒီကိစ္စကို ထောက်ပြဝေဘန်ပြေီး သတိပေးတော့ လူမိုက်အများစုပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အထူးအရံ ရဲအဖွဲ့ဆိုတာကို လူလေးသောင်းကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီလူတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်က NLD ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေ၊ ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေကို အင်အားသုံး တိုက်ခဲ့ကြသူတွေ အများစု ဖြစ်တာမို့ ပိုတောင်အန္တရယ်ကြီးပါတယ်။
တကယ်လို့ NLD ကိုဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပါတီကိုဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်လာရင် လုံခြုံရေး အကြောင်းပြပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး လွှတ်တော်နေရာ (၇၅)% ထဲက နောက်ထပ် ရာခိုင်နှုန်းတချို့ လျှော့သွားအောင် ထပ်လုပ်ဦးမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဒါဆိုရင် NLD အနိုင်ရရင်တောင် လွှတ်တော်နေရာ (၅၀)% မကျော်တော့ပါဘူး ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရယ၊် အစိုးရရယ၊် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရယ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်ချပြီး လုပ်နေတာပါ။ ဒီအချက်တွေကြောင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို လွှတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု တစိတ်တပိုင်း ရှိအောင်လုပ်ဘုိ့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိုက်အခံပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ သပိတ်မှောက်ဘို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် မတရားမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရင်းပဲ ရှေ့ဆက်လျှောက်နေကြရတယ်။ ဒီအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ တွန်းအား၊ ဖိအားပေးမှုတွေက ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံရုံး (၉) ခုက ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး သတိပေး ဖိအားပေးတာရှိတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်က အစီရင်ခံစာ ရေးပြီး လက်ရှိမတရားမှုတွေကို တင်ပြတာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ဘို့ တောင်းဆိုတာ ရှိတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရကလည်း ဒီကိစ္စတွေကို မျက်မှာလွှဲထားမှာ မဟုတ်သလို ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လိုကျင်းပသလဲ ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်သလဲ၊ ဒီရလဒ်အပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီသဘောထား၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ သဘေထား၊ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ သဘေထားတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ပေါ်လာမည့် အစိုးရသစ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး အနေအထားကို ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ တရားဝင်ထုတ်ဖေါ် သတိပေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ သြစကြေးလျားမှာ နေကြမှာမို့ သြစကြေးလျား အစိုးရက အလားတူတုန့်ပ်ြလာဘို့ စည်းရုံး ကြိုးပမ်းကြဘို့၊ နိုင်ငံတကာဆိုတာ သူတို့အကျိုးစီးပွားကို အဓိကထားတာမို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် ဘာမှ သိပ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ မြင်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို တစိတ်တပိုင်း လက်ခံခဲ့ပေမဲ့ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်း ဖြစ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီကို ရနိုင်သလောက် ရအောင်ယူဘို့ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ၊ တွန်းအားတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် လွတ်လပ်မှု ရှိအောင် ၀ိုင်းဝန်းကျိုးပမ်းပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
နိဂုံးချူပ်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်စုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD ကိုလွှတ်တော်နေရာ အများဆုံး အနိုင်ရအောင် အစိုးရဖွဲ့နိုင်အောင် အားလုံးက ဘက်ပေါင်းစုံ ပံ့ပိုးကူညီပေးကြဘို့ အစိုးရဖြစ်လာရင်လည်း NLD က ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ Constitution ဖွဲ့စည်းပုံအခြေဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်အားပေး ထောက်ခံကူညီပေးကြဘို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ဘာကြောင့် ပြင်ဆင်ဘို့ လိုအပ်သလဲ
Monday, June 29, 2015 Nge Naing 17 comments
အဲဒီစာအုပ်က အဖုံးကလွဲရင် အကုန်ပြင်ရမှာ (အဖုံးလည်း မလိုချင်ပါဘူး - ပရိတ်သတ်အသံ) ဘာဖြစ်လို့ ခင်ဗျားက အဖုံးချန်ထားချင်တာလဲလို့ ကျနော့်ကို ကျနော့်မိတ်ဆွေ ဥိးကိုနီက မေးဖူးတယ်၊ ကျနော်က အရှေ့ကလူ လုပ်တာအကုန် ဖျက်တတ်တဲ့ အကျင့်မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အတွင်းက ပိုးထိုးလောက်ကိုက်နေတာတွေကို ကျနော်တို့က ဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဘယ်လောက်ရင်နာဘို့ ကောင်းသလဲဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ တခုလုံး ထောင်းထောင်းကြေအောင် ပျက်စီးသွားတဲ့ နာဂစ်ကာလ ကျနော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ နာဂစ်မုန်တိုင်းထဲမှာ သေကြေခဲ့တယ်၊။ လူအသေကောင်တွေ သစ်ပင်တွေမှာ ချိတ်နေတယ်၊ လူအသေကောင်တွေ မြက်တောထဲမှာ မြောနေတယ် ရေထဲမှာ၊ အဲဒီလို ဒုက္ခသုက္ခတွေ ရောက်ပြီးတော့ ပင်ပမ်းဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ ကြုံနေရတဲ့နေရာကို မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက စေတနာတွေနဲ့ အထည်လိပ်တွေ စားသောက်ကုန်တွေ သွားပြီးတော့ ကူညီကြတယ်။ လူသားဆန်တဲ့သူတွေက အဲဒီလို လူဆန်ဆန် လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေက အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြဌာန်းဘို့ အသည်းအသန် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ အလောင်းပေါ်ကနေ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေ အင်မတန် ပုပ်စော်နံတယ်။ အင်မတန် ပုပ်စော်နံတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို သူတို့ဘာကြောင့် အသည်းအသန် ရေးဆွဲဘို့ ကြိုးစားခဲ့သလဲ။ ကမ္ဘာမှာ ၁၃ နှစ်ကျော် အချိန်ယူပြီး ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေ၊ အဲဒီ ၁၃ နှစ်ကို တနှစ်မှာ ၃၆၅ ရက်နဲ့ မြှောက်လိုက်၊ ရလာတဲ့ အရေအတွက်ကို မှတ်ထား၊ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပါတဲ့ပုဒ်မအရေအတွက်ကို မှတ်လိုက် ပြီးရင် စားကြည့်လိုက် တနေ့ကို ပုဒ်မတခုပဲ ရေးရင်တောင် ၁၃ နှစ်မကြာဘူး။ ဘာကြောင့် ၁၃ နှစ်ကြာအောင် ရေးလဲဆိုတာ သိချင်ရင် အဲဒီလူတွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာသွားလဲ သွားကြည့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူး ရေးဆွဲနေတယ်လို့ အကြောင်းပြပြီးတော့ နိုင်ငံက သယံဇာတတွေ ဘဏ္ဍာတွေ၊ ပြည်သူ့ပစ္စည်းတွေကို အကုန်လုံး သူတို့ဂိုဒေါင်ထဲ ကဲ့ယူနေတာ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆွဲလို့ ကြာတာမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာကို ဒို့ဘိုးဘွားအမွေအနစ် လုပ်နေလို့ အဲလောက်ကြာသွားတာ၊ အဲဒါကို လူကြားကောင်းအောင် လျှောက်ပြောတာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲက အမျှော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ အိပ်မက်အရ ဆွဲနေတာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို။ ပြီးလည်းပြီးရော ထွက်လည်းထွက်လာရော ဟိုနားကတပိုင်းတစ၊ အင်ဒိုနီးရှားကဟာက နည်းနည်း၊ ဟို ဥရောပတိုင်းပြည်တွေက ဟာကနည်းနည်း အမေရိကန်ကဟာက နည်းနည်း အဲဒီလိုနဲ့ စုပေါင်းစပ်ပေါင်း ဥပဒေ၊ အဲဒီတော့ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက စောစောက တယောက်ပြောတယ် ပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရနဲ့ကြားမှာ ချူပ်ထားတဲ့စာချူပ် လွယ်လွယ်လေးရယ် ဒါပေမဲ့ ပြည်သူ့ရဲ့ အာဏာကို ပြန်ပေးရမည့်အချိန်မှာ သူတို့ကအကုန်လုံးကိုပိတ်တယ်နော့်၊ အကုန်လုံး ဘာပိတ်လဲဆိုတော့ သူတို့က အိမ်တလုံးကို နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ တိတိကျကျ ပြောရင် ၂၂ နှစ်၊ အဲဒီအိမ်ကို သူတို့အပိုင်စီးတယ် အပိုင်စီြး့ပီးတော့ ၂၂ နှစ်ကျော်လို့ ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ဖေးတံခါးကို ဒလက်ထိုးပြီးပိတ်တယ်။ ပြူတင်းပေါက်တံခါးတွေကို ဒလက်ထိုးပြီးပိတ်တယ် အကုန်လုံး ရှိသမျှအပေါက် ပိတ်ပြီးတော့မှ နောက်ဆုံး အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးကို ဒလက်ထိုးပြီးတော့ သော့ခတ်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်တဲ့ သော့ခလောက်က အဲဒီပုဒ်မ ၄၃၆၊ ဖြစ်တယ်။
ကျနော်နည်းနည်းပြောပြမယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို အခုဘာစနစ်နဲ့ တည်ဆောက်သလဲဆိုရ်င ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၇) မှာပြောတယ်၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ တည်ဆောက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာက ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးရတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို အစိုးရက နားထောင်ရတယ်။ အောက်ကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင် အထက်က ဆင်းပေးရတယ်၊ အဲဒါ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ ဒိမိုကရေစီ၊ အဲဒီပုဒ်မ (၇) ရဲ့အပေါ်ဘက်ကလေးမှာပဲ တကြောင်းပါတယ်၊ ပုဒ်မ (၆) စ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားရေး ဦးဆောင်ကဏ္ဍတွင် အစဉ်ထာဝရ တပ်မတော်က ဦးဆောင်နေပါတယ်၊ ပုဒ်မ (၆) စလုံးမှာနော် ဖင်တခွန်းခေါင်းတခွန်းဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တပ်မတော်ဆိုတာ အပေါ်ကအမိန့်ပေးရင် ဟိုကုန်းတက်သိမ်းဆို ဟိုအပေါ်က လက်ပစ်ဗုံးကို လိမ့်ချတယ်ဆိုလည်း တက်ရတယ်။ ငြင်းလို့မရဘူး နော့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်က အမိန့်ပေးလိုက်တယ်၊ အောက်ကလူတွေက အကုန်နားထောင်ရတယ်။ အဲဒီ ဗျူဟာမှူးက အမိန့်ပေးလိုက်ရင် တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ဖွဲ့ အောက်က အကုန်လုံးနားထောင်ရတယ်။ တပ်သားက ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူး။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို တောက်လျှောက် ခေါင်းငုံ့ခံရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အောက်ကနေ အပေါ်ကိုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းနှစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်တူမလဲ။ အဲဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုကို တည်ဆောက်ချင်ရင် တပ်မတော်က လုံးဝဦးဆောင်လို့မရဘူး။ ပါတောင်ပါလို့မရဘူး ဦးဆောင်ဘို့တော့ ဝေးရော။ တပ်မတော်က ဦးဆောင်နေ ပါနေတဲ့ နိုင်ငံမှာလည်း ဘယ်တော့မှ ဒီမိုကရေစီ မထွန်းကားဘူး။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ အစိုးရက ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ အိုးကင်းပူနဲ့ လှော်ထဲတဲ့ နှမ်းတို့ ပဲတို့ကို ချပြီး ဓာတ်မြေသြဇာလောင်းပြီး ရေလောင်းနေသလိုပဲ ဘယ်တော့မှ အပင်မပေါက်ဘူး။ ဗမာပြည်မှာ ဘယ်တော့မှ ဒီစစ်တပ်က ၂၅% အစိတ်ရာခိုင်နှုန်းပါနေသမျှ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်တော့မှ ဒီမိုကရေစီမထွန်းကားဘူး။
အဲဒီတော့ စောစောက ၄၃၆ ဒီ ၄၃၆ က သော့ခလောက်ခပ်ထားတယ်။ ဘာတွေအတွက် ခပ်တာလဲ ပြည်ထောင်စုကြီးပဲ့ထွက်သွားမှာ စိုးလို့၊ ရူးနေလား၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ ဒီပြည်ထောင်စုကြီးက ခွဲထွက်သွားမယ်လို့ တခွန်းမှ မပြောကြဘူး။ သူတို့လိုချင်တာ သူ့တို့ရဲ့ အချူပ်အခြာ အာဏာကိုပဲ လိုချင်တာ၊ သူတို့ကံကြမ္မာကို သူတို့ဖန်တီးခွင့် လိုချင်တာ၊ ကျနော်တနင်္သာရီတိုင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့အတူတူ သွားတယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလွန်ထွက်တယ်၊ အဲဒီသဘာဝ ဓတ်ာငွေ့ကို ထိုင်းကိုပို့ပြီး ရောင်းစားတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းက လူတွေက အဲဒီသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို တချက်ကလေးမှ လက်နဲ့ပွတ်ထိပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်တဲ့ နေရာမှာ အခုကျောက်မီးသွေး စက်ရုံဆောက်ဘို့လုပ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ တင်္သာရီတိုင်းက လူတွေက ဘယ်လိုခံနိုင်မလဲ။ တနင်္သာရီတိုင်းက ၀န်ကြီးချူပ်ကို ဘယ်သူခန့်လဲ။ ကဲ တနင်္သာရီတိုင်းဆို ဝေးတယ် ပြောပြမယ်။ ဒီရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချူပ်ကို ဘယ်သူခန့်လဲ ခင်ဗျားတို့ရွေးမိသလား၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချူပ်ကို မဲတပြား ပေးမိလား။ ကျူပ်တို့ မလိုချင်ဘဲနဲ့ ကျူပ်တို့ မခန့်ဘဲနဲ့ အဲဒီဝန်ကြီးချူပ်ကို ဘယ်သူခန့်လိုက်သလဲ။ (သမ္မတခန့်တာ - ပရိတ်သတ်အသံ) အေး အဲဒီသမ္မတက နေရာတကာ ငါခန့်မယ် ငါခန့်မယ်လုပ်လို့မရဘူး။ မိဘနဲ့ သားသမီးတောင် မှ သားသမီးအခန်းထဲကို မိဘ ၀င်ချင်တိုင်း ၀င်လို့မရဘူး။ မင်းအခန်းထဲမှာ ဟိုပုံမချိတ်နဲ့ ဒီပုံမချိတ်နဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ အခုတော့ အဲဒီတိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အကုန်လုံးက ၀န်ကြီးချူပ်ကို အဲဒီသမ္မတက ခန့်နေမှတော့ ဘယ်မှာလဲ ပြည်ထောင်စုစနစ်၊ နားမလည်တဲ့သူတွေကို လိမ်မှာ လူတွေက ငတုံးတွေမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီ ၄၃၆ က ဘာကိုအကာအကွယ်ပေးလဲဆိုရင် အဲဒီလွှတ်တော်ထဲမှာ ပြည်သူတွေက သိလဲမသိ ဘာမှလည်း ဆန္ဒမပြုဘဲနဲ့ အဲဒီတပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို ၀င်ပါဘို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးထားတာ၊ ဒါပဲ ဘယ်ပြည်သူကိုမှ အကာအကွယ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်သား ၂၅% ကို ပုဒ်မ ၇၄ အရ ထည့်ထားတယ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်က ပုဒ်မ ၁၆၁ အရထည့်ထားတယ်။ အဲဒီ ပုဒ်မတွေကို ပြင်လိုက်ရင် သူတို့သည် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥပဒေပြုအာဏာကို လွှမ်းမိုးလို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒါဖြစ်မှာစိုးလို့ ၄၃၆ နဲ့ ပိတ်ထားတာ၊ အဲတော့ ကျနော်အမှတ်မထင်လို့ ပြောပြလိုက်တာ ဒါလေး မှတ်သွားလို့ရတယ် ၇၄ နဲ့ ၁၆၁ ပြင်မှာစိုးလို့ ဒါကြီးနဲ့ ပိတ်ထားတာ ၄၃၆ ကြီးနဲ့။ နောက်တခုထပ်ပြောပေးမယ် အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချူပ်အခြာအာဏာကို ကိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စ အဲဒီမှာ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၁ ဦးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတနှစ်ယောက်၊ ပြီးရင်လွှတ်တော်ဥပက္ကဌ နှစ်ယောက်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး စသည်ဖြင့် ၁၁ ယောက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၁၁ ယောက်မှာ ဒုသမ္မတတယောက်က စစ်တပ်က ခန့်တယ်။ ရေထားကြည့်နော့် ဘယ်နှစ်ယေက်ရှိလဲဆိုတာ၊ သမ္မတကို ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချူပ်က ပြန်ခန့်တာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ပဲ ရှိတယ်။ နော့် ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ ဟုတ်လား တလွဲဂုဏ်ယူရတဲ့ဘ၀၊ သမ္မတကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ကခန့်တာ မြန်မာပြည်မှာ တယောက်ရှိသွားပြီ။
နောက်တခါ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်ရယ် ဒုတိယကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်ရယ် ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပြီလဲ၊ သုံးယောက်ရှိသွားပြီ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက စောစောက ပြောတဲ့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီး ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း ၀န်ကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးစသည်ဖြင့် ၀န်ကြီးချူပ်တွေ အကုန်ခန့်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို သူခန့်ခွင့်မရှိဘူး၊ အင်မတန်မှ သနားစရာကောင်းတဲ့ သမမ္မတ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနော့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကြီးအကဲ အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးကို ခန့်ခွင့်မရှိဘူး။ ဘယ်သူခန့်ပေးလဲ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်က ခန့်တယ်။ ၀န်ကြီးကို ဦးစီးချူပ်က ပြောင်းပြန်ပြန်ခန့်တဲ့ နိုင်ငံ၊ေ-ာက်တလွဲနိုင်ငံ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အဲဒီချစ်လှစွာသော နိုင်ငံမှာ အဲဒီလူတွေ ဘာတွေ ကပြောင်းကပြန်လုပ်နေလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်က အပေါ်မှာ ၀န်ကြီးက အောက်မှာ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဘယ်သူခန့်လဲ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်ခန့်တယ်၊ ငါးယောက်ရှိသွားပြီ။ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဘယ်သူခန့်လဲ ကာချူပ်ခန့်တယ် (ပရိတ်သတ်အသံ) အဲတော့ သူအပါအ၀င် သူ့အောက်မှာ ၆ မဲရှိတယ်။ နိုင်ငံတော် ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ မဲခွဲလိုက်တိုင်း သူက ၆ မဲအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ဘယ်မှာလဲ မဲပြည်သူတွေအတွက်၊ ဘယ်မှာလဲ။ အဲဒီလို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်၊ တပ်မတော်၊ တပ်မတော်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ် တပ်မတော်၊ တပ်မတော် အဲလောက်ကြီး တမိုးလုံးခြောက်စိတ်လုပ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားမယ့် နိုင်ငံတုန်း ဒီနိုင်ငံ။ ဘယ်လိုမှ မထွန်းကားဘူး အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် အဲဒီ ၄၃၆ နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ စွက်ဖက်မှု ချူပ်ကိုင်မှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးထားလဲ ဆိုရင် လွယ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ တပ်မတော်က အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပဲ။ လိမ်မနေနဲ့ ဘာမှ လျှောက် မပြောမနေနဲ့ အမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်ပါ၊ ဘာညာ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ဦးပိုင်ကို ကာကွယ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ကမ္ဘာာပေါ်မှာ တနိုင်ငံလုံးက စီးပွားေ၇း လုပ်ငန်းတွေကို ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကို လွှဲပေးထားတဲ့ တခုတည်းသော နီုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်တပ်က စီးပွားရေး အကြီးအကျယ် လုပ်သောနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အဲဒါကြီးကို အကာအကွယ်ပေးဘို့ ဒီ ၄၃၆ ကြီးကို လုပ်ထားတာ၊ ဘာမှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချူပ်အခြာ အာဏာတွေ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးဘို့တွေ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ နိဂုံးချူပ်ပြောမယ် နော့်၊ နိုင်ငံတော်မှာ တပ်မတော်က အဲလိုစွက်ဖက်နေပြီ ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ ဘယ်တော့မှ မထွန်းကားဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ တပ်မတော်သားတွေကို မုန်းလို့ ဒီစကားတွေကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ အင်္ဂါတွေထဲမှာ ခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ တူတယ်လို့ နော် စာပေတွေမှာ အကုန်လုံးပါတယ်။ ပြည်ဦးကင်းဆိုတာ ရှိတယ်၊ ပြည့်ဝမ်းဗိုက်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ပြည့်ခြေ ပြည့်လက်၊ ပြည့်နားဆိုတာ ရှိတယ်။ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တခု ပြည့်ခြေပြည့်လက် မကောင်းလို့ ဖြတ်ပစ်လို့ ရမလား၊ မရဘူး ဒီလက်တွေခြေတွေ မကောင်းလို့ ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ဖြတ်ပစ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလက်က ခေါင်းနေရာမှာ လာပေါက်ရင်တော့ ကျူပ်တို့လက်မခံဘူး။ လက်က လက်နေရာမှာ နေပေး၊ ခြေတောက်က ခြေတောက်တေနရာမှာ နေပေး၊ တပ်မတော်က တပ်မတေ်ာက နိုင်ငံကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နေပေး။ နိုင်ငံကို ဘယ်နေရာကနေပြီး. ကာကွယ်မလဲ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နမိတ်တွေကနေ ကာကွယ်ပေါ့၊ ဘာကြောင့်မို့လို့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ လာပြီးတပ်ပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရ လာလုပ်သတုန်း။ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ကြီးမှာဗျာ တခါတည်း လာပြီး ဟိုနားကြည့်လိုက်လည်း တပ်ပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရ၊ ဒီနားကြည့်လိုကလည်း တပ်ပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရ၊ အဲဒီတပ်ပိုင်မြေ ဘယ်သူက ပေးထားလို့တုန်း၊ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူကပေးထားတာလဲ။
ဟောဒီမှာ ဒီဘုရားရဲ့ ပရ၀ဏ်ကို ချဲ့ချင်တယ် အနောက်မှာ နေရာလွှတ်ရှိတယ် ဆိုရင်တောင် ချက်ချင်း ၀င်းခတ်ပြီး ချဲ့လို့ရလို့လား။ (မရပါဘူး ပရိတ်သတ်အသံ) လျှောက်ရတယ်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးကို လေ။ျှာက်ရတယ်။ အဲဒီကနေမှတဆင့် လွှတ်တော် ဟိုတုန်းကတော့ လွှတ်တော်မရှိသေးဘူးပေါ့ တရားဝင် လျှောက်ရတယ်။ အဲဒီတော့မှ အဲဒီ ပလပ်မြေကို ဘုရားပိုင်မြေအဖြစ် ပေးလိုက်ပါဆိုမှ တရားဝင် ပေးလို့ရတယ်။ အဲဒီတပ်ပိုင်မြေကို ဘယ်သူက သူတို့ကို တရားဝင်ပေးလို့ သူတို့က တပ်ပိုင်မြေလို့ ပြောရသတုန်း၊ ဘယ်ဥပေဒေနဲ့ ပေးလဲ။ သူတို့ တောက်လျှောက် အုပ်ချူပ်လာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁) ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာနော့်။ ဟို ၁၉၉၀ ကို ပြည်သူတွေက ပြည့်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လွှဲမပေးတော ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တောင်းဆိုတော့ ဘာပြောခဲ့လဲ ဘာဥပဒေနဲ့ လွှဲပေးရမလဲလို့ ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်ချူပ်ခင်ညွန့် ကျူပ်တို့မှာ လွှဲပေးစရာဥပဒေမရှိဘူးတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဥပဒေ အရင်ဆွဲဆိုပြီးတော့ ၂၂ နှစ် အုပ်ချူပ်သွားတာ တိုင်းပြည်ကို။ သူလည်းပဲ ကာလ၀ိဘက်တော့ တက်သွားတာပါပဲ။
အဲတော့ ကျနော်ပြောချင်တာက အဲဒါတွေ နောက်ဆုံး ပြောချင်တာက ခင်ဗျားတို့က တပ်ပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရလို့ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ ပိုင်မြေကို ခင်ဗျားတို့ ကျူးကျော်နေတာလို့ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ရမှာ၊ ပြည်သူပိုင်မြေ ခင်ဗျားတို့ ကျူးကျော်စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် တပ်မတော်အတွက် နေရာတိုးချဲ့ဘို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လျှောက်၊ လွှတ်တော်မှာ လျှောက်ပါ အဆောက်အဦးအတွက် ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ် ဘာတွေ တိုးချဲ့ဘိုလိုတယ်။ စစ်လေ့ကျင့်ကွင်း ကွင်းတွေ တည်ဆောက်ဘို့လိုတယ် ဒါကြောင့်နေရာပေးပါ ဆိုပြီးတောင်း။ အဲဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက တဆင့် ကျူပ်တို့က ပေးသင့်တယ်ဆိုရင် ပေးမယ်။ ခွင့်ြ့ပုသင့်ရင် ခွင့်ပြုမယ်။
ခင်ဗျားတို့ဟာ ခင်ဗျားတို့ ဗီနိုင်းလေးတချပ် အကုန်ခံပြီးတော့ ပြည်သူပိုင်မြေတွေကို ကျူးကျော်ပြီး ပြည်သူကို ပြန်သူခိုးစွဲနေတာကိုတော့ ရပ်တန်းကရပ်ပေးပါ။ အဲဒီတော့ လွှတော်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေရဲ့ နေရာလဲ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ နေရာ၊ အဲဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ နေရာထဲကို ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတပြားတချပ်မှ မပါဘဲနဲ့ ခပ်တည်တည် ၀င်လာလိုက်၊ လူစားထိုးလိုက် တော်ကြာအလှည့်ကျလာလိုက် အဲလိုလုပ်နေတာကို လက်မခံဘူး။ ဒါက ၁၁ ယောက်စလုံး လဲပြီးကစားခွင့်ရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲမဟုတ်ဘူး။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့တော့ လူလဲ၊ ဒီမှာတော့ သေသွားလို့တောင် လူတယောက် အစားထိုးလို့မရဘူး။ သူက အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစားထိုးလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစားထိုးလိုက် လုပ်နေတယ်။ လွယ်လွယ်လေး ၂၅% က တပ်မတေ်ာသား တဦးချင်းရဲ့ ဆန္ဒလား အဲဒီတယောက်တည်းရဲ့ ဆန္ဒလား၊ (တယောက်တည်းရဲ့ ဆန္ဒပါ - ပရိတ်သတ်အသံ) အဲဒီတယောက်တည်းရဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ဟောဒီက ကျန်တဲ့ သန်း ၆၀ က ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလူပါးဝရာ ရောက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် တောင်းဆိုပါတယ် ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် ဖွင့်ပေးပါ ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲကနေပြီးလည်း ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ နေရာမှာ မနေနဲ့ ခေါင်းနေရာမှာ လက်ပေါက်နေတာ ကြည့်မကောင်းဘူး ကျက်သရေလည်းမရှိဘူး၊ အမြန်ဆုံး ထွက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုရင်းနဲ့ နိဂုံးချူပါတယ်။
ဂျွန် ၆ စိတ်ဓာတ်
Saturday, June 06, 2015 Nge Naing 1 comment
ဆို မင်းမင်းထွေးငယ် ABSDF သေ့ဘောဘိုး စခန်း၊ တပ်ရင်း (၂၀၄)
" အာဏာရူး စစ်အစိုးရသည် မုချမသွေ ကျဆုံးရမည်
ဂုဏ်ပြောင်တဲ့ ဂျွန် ၆ စိတ်ဓာတ် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အဓွန့်ရှည်ပါစေ"
အင်ဖက်နဲ့ သက်ကယ်မိုးပြီး ၀ါးခြမ်းပြားနဲ့သဲပို့ခင်းတဲ့ ရုံးမှာ စောင်ကာပြီး စတီရီယိုအဖြစ် ဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာ အဆိုတော် မဟုတ်သူတွေ သီဆိုထားတဲ့ ဒီသီချင်းကို ခေတ်မီ တေးသံသွင်းခွေတွေထဲက ဘယ်နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းနဲ့မှ ကျွန်မ မလဲနိုင်ဘူး။ ၁၉၇၄ ခု ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ အာဏာရှင်တွေ လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုတဲ့သီချင်း တပုဒ်ဖြစ်တယ်။ ဂျွန် ၆ မှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အလေးပြု ဂုဏ်ပြုရင်း ဒီသီချင်းခွေ စတင်ရာ ဘ၀တက္ကသိုလ်မှာ ရှင်သန်ခဲ့ဖူးသူတွေရော မိုးမခပင်အောက်က ဘ၀တက္ကသိုလ်ကို မရောက်ဖူးသူတွေပါ အတူတူ လွမ်းဆွတ်ကြရအောင်။
အလုပ်သမားသပိတ်တိုက်ပွဲမှာ သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားအပေါင်း
(ကမ်းခြေလှိုင်းတံပိုးကြားက အလုပ်သမားတပ်ဦး အောင်လံနီနီ ရုန်းထွက်လူးလို့ လေမှာမြူးခဲ့ပြီ…)
(အလုပ်သမားတို့ တိုက်ပွဲခေါ်သံသည် မြန်ပြည်တွင်မက ကမ္ဘာမြေအနှံ့ပြန့်လွှင့်ခဲ့ပြီ စစ်ဖိနပ်အောက် ဒူးမထောက်ခဲ့ပြီ.. ငတ်ရင်းအသေမခံ တိုက်ရင်းသာ အသေခံမည် ဘာမထီ ဇာနည်စိတ်ဓာတ်မွေးခဲ့ပြီ..)၂
(နီမောင်းတဲ့ အလုပ်သမားတို့ သွေးနှင့်ရင်းကာ ဂုဏ်ပြောင်တဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာ ဖွင့်ခဲ့လေပြီ ပြည်သူများ နိုးကြွားခဲ့ပြီ ပြည်သူအားလုံး နိုးကြွားခဲ့ပြီ တို့များတပ်ဦးက ဦးဆောင်ပါသည် အလုပ်သမား လယ်သမား ကျောင်းသားများ လက်တွဲညီညီ သွေးကြွေးကို သွေးနဲ့ဆပ်မည် အဓိဋ္ဌာန်ပါသည် တိုက်ပွဲအောင်လံ မိုးယံလွှင့်တော့မည်..)၂
မြို့ပြအုံကြွမှုနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မနှေးအမြန် ပေါင်းစပ်ရမည် ပြည်သူများကို တပ်လှန့်နိုးပါသည်… အာဏာရူး… စစ်အစိုးရသည် မုချမသွေ.. ကျဆုံးရပေမည်.. ကြီးမြတ်တဲ့တိုက်ပွဲ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အဓွန့်ရှည်ပါစေ.. နီမောင်းတဲ့ အလုပ်သမားသွေးသမိုင်း ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အဓွန့်ရှည်ပါစေ.. ဂုဏ်ပြောင်တဲ့ ဂျွန် ၆ စိတ်ဓာတ် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အဓွန့်ရှည်ပါစေ…
ဓာတ်ပုံကို သော့ဘောဘိုးစခန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တဦး ဖြစ်သူ ကိုလှိုင်ဘွား Hlaing Bwa Maung စာမျက်နှာရှိ Comrades and Generation album ထဲက ယူပြီး ဒီအခွေထဲကက ရဲဘော်အဆိုရှင် ကိုမြတ်သူက ၂၀၁၃ တုန်းက ကျွန်မကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့ နေ၀န်းနီနီအခွေ အသံဖိုင်ထဲက ဂျွန် ၆ စိတ်ဓာတ်ကို ယူသုံးထားပါတယ်။ ကိုလှိုင်ဘွားနဲ့ ကိုမြတ်သူကို အထူးကျးဇူးတင်ပါတယ်။
၂၀၁၅ အတွက် ကိုနေမျိုးဇင်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်မှ အမှာစကား
Friday, June 05, 2015 Nge Naing 15 comments
ဟန်ချက်ညီတဲ့ တိုက်စစ်ကို မဆင်နိုင်ဘဲ အလဲလဲ အကွဲကွဲနဲ့ မှိုင်းတိုက်သမျှနောက်မှာ ယောင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၂၀ ကြားမှာလည်း ခွေးလိုလို ခြင်္သေ့လိုလို တိရစ္ဆာန်တွေကို ဦးခိုက်နေတဲ့ လူတစုရဲ့ လက်အောက်မှာပဲ ထင်သလို အလုပ်ခံနေရဦးမယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ တိရစ္ဆာန်ကိုးကွယ်တဲ့သူကို ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တင်မလား ပြည်သူကို တန်ဖိုးထားတဲ့သူကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ထားမလား ပြည်သူအားလုံး ရွေးချယ်ပါလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ (ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်)
ကိုနေမျိုးဇင်အနေနဲ့ပေါ့နော့် 2015 မှာ ပြည်သူတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေအားလုံးကို ဘာများ ပြောကြားချင်ပါသလဲချင်ဗျား။
အဓိကက နိုင်ငံရေးစိတ်ပါဝင်စားမှုကို နိုးကြွားတက်ကြွမှု အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်း ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း အားလုံးဟာ နိုးကြွားဘို့ ပထမတချက်၊ ပြီးတော့မှ နိုးကြွားမှုနဲ့အတူ ဒီဆန္ဒမဲတပြားရဲ့ အရေးကြီးပုံ၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ကာလ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောစကားအရဆိုရင် ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲသာလျှင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ် ပေးတယ်ဆိုတော့ကာ အခု ၂၀၁၅ သည် စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကနေ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို ကူးပြောင်းမည့် ဒုတိယကြိမ်မြှောက် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်။ ပထမအကြိမ်မှာ ကလိန်ခြုံကျ ကျပါစေ၊ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်က အသွင်ပြောင်းစမို့ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ထပ်ကလိန်ခြုံကျလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ နှစ်ပြည့်ပြီးသော ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အားလုံးသည် အတိတ်သမိုင်းရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကျေကြပါ။
၂၀၁၀ တုန်းက ဘယ်လိုကလိန်ခြုံလုပ်သွားတယ်၊ ဘယ်လိုကြိုတင်မဲတွေ အိတ်လိုက်နဲ့ ဘယ်လို ဘယ်လိုဓာတ်တိုင်တွေ အရောင်ပြစိုက်ပြီး ဘယ်လိုလမ်းခင်းကျောက်တွေနဲ့ မဲလိမ်သွားလဲ၊ ဘယ်လို ငွေချေးပြပြီး ဘယ်လိုနားလှည့်ပါးလှည့်လုပ်ပြီး ပါးရိုက်သွားလဲ ဒီသမိုင်း ဒီသမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို ယူပါ။ အဲဒီ မဲတခုခု ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘဲ မဲရယူခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လက်ရှိ ၄ နှစ်ကျော်သက်တမ်း လွှတ်တော်တွင်းက အစွမ်းအစကိုလည်း ကျနော်တို့ အားလုံး သိရှိပြီးဖြစ်တယ်။ သူ့လစာတိုးရေးကလွဲလို့ တိုင်းပြည်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ ပြတ်သားတဲ့ မားမတ်တဲ့ မခြေခံ ပန္နက်တွေအထိ သက်ရောက်စေမယ့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေး တခုမှ ယခုလွှတ်တော်အတွင်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အများစုက လုပ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ အနည်းစုကြိုးပမ်းပေမဲ့ လူညီရင် ဤကျွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စားဖားချင်းညီညွတ်နေတဲ့တသိုက် ကဖျက်ယဖျက်လုပ်လို့ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းစေရာကောင်းစေကျိုး သယ်ပိုးဘို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနည်းစုရဲ့ တင်ပြချက်တွေ အဟောသိကံ ဖြစ်သွားတာ အများကြီး ကျနော်တို့ သမိုင်းသင်ခန်းစာ ရပြီးပြီ။
အဲတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို လွှတ်တော်ထဲကို နောက်တဖန်ခြေချခွင့် မရအောင် သူတို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းလာနိုင်ခြေရှိတဲ့ ကကြိုးလေးနဲ့ ပြောရရင် စနစ်ဆွေးပိုးလောက်တွေရဲ့ အသစ်ခွေးတိုးပေါက် PR ဆိုတာမျိုးကိုလည်း လက်မခံဘို့ မဲလိမ်၊ မဲခိုး၊ မဲဆွယ်၊ မဲညာ၊ မဲယောင် လုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူ့မဲကို လတ်တလောရရင်ပြီးရော မဲရပြီးနောက်နေ့ ပြည်သူ့အကျိုး လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး ပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အချိုးရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုးတွေ လွှတ်တော်ထဲကို နောက်တကြော့ ခြေချခွင့်မရဘို့ ဒါကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ တဘက်က ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ် ပြည်သူ့ပါတီစစ်စစ် ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။ နေ့စဉ် လူသားစိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစားစိတ်နဲ့ အသိညာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ နိုင်ငံရေးစာပေ လေ့လာဖတ်ရှုသုံးပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ ချိန်ထိုးပြီးတော့ ရွေးချယ်ပါ။
ဖြစ်မြှောက်အောင် မဲပေးပါ။ မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိအောင် အခုကတည်းကကြိုးစားပါ။
ကိုယ်မဲပေးလိုက်တဲ့လူကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တိတိကျကျ ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့် ရရှိအောင် ပြည်သူ့အစိုးရ စစ်စစ် တရပ်ပေါ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရရှိအောင် ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် လူထုခေါင်းဆောင် သမ္မတဖြစ်ခွင့်၊ သမ္မတ မဖြစ်မနေ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် ဘုရင့်နောင်ဖေါင်ဖျက်ကိန်းကို ပြည်သူတိုင်း အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပါ မကျန် ၂၀၁၅ မှသည် နောက်ဆက်မယ့် ခေတ်အဆက်ဆက်အထိ ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့အာဏာသည်သာလျှင် တည်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကို တကယ်ထမ်းဆောင်မယ့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနှင့် ပြည်သူများကောင်းကျိုးကို ပြည်သူများရဲ့ စုစည်းညီညွတ်တဲ့အားနဲ့ ကြိုးပမ်းသွားမယ့် ပြည်သူ့လက်ထဲမှာ အာဏာရှိအောင် ပြည်သူတွေ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို ပြည်သူတွေ အခုကတည်းက မွေးဘို့ မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးလာရမည့် မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း အခုကတည်းက သွန်သင်ပေးသွားဘို့ အရေးတကြီးလိုနေပြီလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကာလ မတိုင်ခင် ဖမ်းဆီးမှုတွေ ထပ်ကြမ်းကောင်းကြမ်းလာနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလော ကျနော်တို့ အဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေ အခုဆိုရင် ထောင်ထဲမှာ သုံးရာကျော်လောက် ရှိနေပါပြီ။ ဒီလူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ရင် ဂလိုင်မဖေါက်ဘူး၊ ကိုယ့်ပေါင်ပေါ်မှာ မီးပွားမကျသေးသရွေ့ ငါပူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုး မထားဘဲနဲ့ မတရား ဖမ်းဆီးခံရမှု သေးသေးလေးကအစ လက်မခံဘဲနဲ့ တရားဥပဒေအတိုင်း စစ်စစ် မှန်မှန် ပြည်သူ့အကျိုးကို ရှေ့ရှုတဲ့ စီရင်ထုံးတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်မှု မျက်နှာပြောင်တိုက်၊ တိုက်လေ့တိုက်ထ ရှိတဲ့ အုပ်ချူပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးကို ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့အား စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရဲ့အား ပေါင်းစပ်ညီညွတ်တဲ့အားနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြ ဝေဖန်ရှုပ်ချခြင်းနည်းဖြင့် အမှန်တရားတွေ၊ ပြတ်သားတဲ့ စီရင်ထုံးတွေ မတရားဖမ်းဆီးထားခံထားရတဲ့ ပြည်သူ၊ နိုင်ငံသား အကျဉ်းသားတွေ လွှမြှောက်အောင်လည် တဘက်တလမ်းက ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းပေးပါ။
ညီတဲ့ တိုက်စစ်ကို မဆင်နိုင်ဘဲ အလဲလဲ အကွဲကွဲနဲ့ မှိုင်းတိုက်သမျှနောက်မှာ ယောင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၂၀ ကြားမှာလည်း ခွေးလိုလို ခြင်္သေ့လိုလို တိရစ္ဆာန်တွေကို ဦးခိုက်နေတဲ့ လူတစုရဲ့ လက်အောက်မှာပဲ ထင်သလို အလုပ်ခံနေရဦးမယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ တိရစ္ဆာန်ကိုးကွယ်တဲ့သူကို ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တင်မလား ပြည်သူကို တန်ဖိုးထားတဲ့သူကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ထားမလား ပြည်သူအားလုံး ရွေးချယ်ပါလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမီးအမြန်ဆုံးမီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည့်Bio Foam မီးသတ်ဆေးအတွက် ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းက ဦးဆောင်၍ ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း (၃၄၀၀) လှူဒါန်း
သတင်းစာဆရာကြီးဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၄ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား
နတ်မောက်နဲ့ရွှေစက်တော် သွားချင်ပါတယ် မောင်လိုက်ပို့နော်